Ịzụ Ụmụ—Otú A Ga-esi Kụziere Ụmụaka Ka Ha Na-erube Isi | Ihe Ndị Ga-enyere Ezinụlọ Aka
Teta! | Julaị 2015
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bislama Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Luvale Macedonian Malagasy Myanmar Norwegian Oromo Polish Portuguese Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Kụziere Ụmụ Gị Ka Ha Na-erube Isi
IHE MERE O JI ESI IKE
Ka e were ya na nwa gị dị afọ anọ na-achọ ka ị na-eme ihe ọ bụla ọ chọrọ, ọ bụkwa ihe ọ chọrọ ka ị na-emekarị.
Ị gwa ya mee ihe ọ na-achọghị ime, ya eleghara gị anya.
Ị sịkwa ya emela ihe ọ chọrọ ime, ya esiwe ọnwụ.
Ụdị ihe a mee, ihe i nwere ike ịjụ onwe gị bụ, ‘Ọ̀ bụ àgwà ụmụaka na-enye nwa m a nsogbu? Ọ̀ ga-emecha tofee ya?’
Ị ka nwere ike ịkụziri nwa gị ka ọ na-erube isi. Ma tupu anyị amata otú i nwere ike isi eme ya, ka anyị leba anya n’otu n’ime ihe ndị na-eme ka ụmụaka na-eme isi ike.
IHE MERE ỤMỤAKA JI EME ISI IKE
Ọ bụrụ na a mụọ nwa ọhụrụ, ọrụ nne ya na nna ya bụ ilekọta ya, ha ga na-apakwa ya apa. O behaala ákwá, ha agbara bịa ka ha mara ihe na-eme ya. Nke bụ́ eziokwu bụ na ọ bụ ihe ahụ́ ụmụaka chọrọ n’oge ahụ, anya ndị nne na nna kwesịkwara ịna-adị n’ebe nwa ọhụrụ ha nọ.
Ka nwa ahụ na-etolite, ọ ga-amalite ịna-eche na papa ya na mama ya kwesịrị ịna-emere ya ihe ọ bụla ọ chọrọ. Ma mgbe ọ na-erula afọ abụọ, ọ ga-edo ya anya na egwú adagharịala. Ọ ga-achọpụta na ọ ga na-emezi ihe papa ya na mama ya chọrọ, ọ bụghị ya ga na-atụrụ ha ụka. Ọ ga-abịa dị ya ka ọ̀ nọ ná nrọ. Egwú dagharịa otú a, ụfọdụ ụmụaka na-amalite isi ọnwụ. Ndị ọzọ na-ajụkwa ime ihe papa ha ma ọ bụ mama ha kwuru.
Ọ bụrụ na nwatakịrị amalite ịkpa ụdị àgwà a, ndị nne na nna kwesịrị ịgbadosi ụkwụ ike n’ala mee ka ihe ha chọrọ ka nwa ha na-eme doo ya anya. Ma, gịnị ka ha ga-eme ma ọ bụrụ na nwa ha anaghị ekwe eme ihe ha gwara ya otú ahụ nwa ahụ e ji mee ihe atụ ná mmalite isiokwu a si eme?
Ahapụla nwa gị ka ọ na-eme ihe masịrị ya. Nwa gị agaghị na-asọpụrụ gị ma ọ bụrụ na ị hapụ ya ka ọ na-eme ihe masịrị ya. N’ihi ya, na-agwa ya ihe ị chọrọ ka o mee. Ma, emela ka ị̀ na-akpa ya ahụ́. Ụfọdụ ndị kpọrọ onwe ha ndị ọkachamara na-ekwu na nne na nna ọ bụla na-enye ụmụ ha iwu na-akpa ha ahụ́. Otu n’ime ndị ọkachamara ahụ kwudịrị na isi otú ahụ azụ ụmụaka adịghị mma. Nke bụ́ eziokwu bụ na ọ bụrụ na mmadụ ahapụ ụmụ ya ka ha na-eme ihe ọ bụla masịrị ha, ha agaghị ama aka nri ha na aka ekpe ha, ha ga-alakwa n’iyi.—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: Ilu 29:15.
Na-adọ nwa gị aka ná ntị. Otu akwụkwọ kwuru na ịdọ aka ná ntị pụtara inye mmadụ ọzụzụ ka onye ahụ mụta irube isi ma ọ bụ ijide onwe ya. O kwukwara na a na-enye onye a na-enye ọzụzụ iwu, na-atakwa ya ahụhụ ma ọ daa iwu ahụ. Ma, e kwesịghị iji obi ọjọọ na-adọ mmadụ aka ná ntị. Ị na-adọ nwa gị aka ná ntị, mee ka ọ ghọta na ị chọrọ inyere ya aka nakwa na àgwà ahụ ọ kpara nwere ike ịkpatara ya nsogbu.—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: Ilu 23:13.
Gwa nwa gị ihe ị chọrọ ka o mee. Ụfọdụ ndị nne na nna na-eme ha chọọ ka nwa ha mee ihe, ha agwawa ya okwu ka hà na-arịọ ya arịrịọ. Ihe mere ha ji eme otú ahụ nwere ike ịbụ na ha chere na ọ bụ otú dị mma e si azụ ụmụaka. Ọ bụrụ na ndị nne na nna emee otú ahụ, ọ ga-eme ka nwa ha chewe na ọ bụ ya ka ọ dị n’aka ikpebi ma ọ̀ ga-eme ihe ha kwuru ma ọ bụ na ọ gaghị eme ya. Kama inyewe nwa gị ụdị ohere a, gwa ya hoo haa ihe ị chọrọ ka o mee.—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: 1 Ndị Kọrịnt 14:9.
Alala azụ n’ihe i kpebiri. I kpebie ihe ị chọrọ ka nwa gị mee, ya emela gị obi abụọ, gị na di gị ma ọ bụ nwunye gị kwesịkwara inwe otu olu. Ọ bụrụkwa na ị gwa nwa gị ihe ị ga-eme ya ma o nupụ isi, mee ya ihe ahụ ma o nupụ isi. Gị na ya anọkwala na-akpa isiokwu n’ihe mere i ji gwa ya ihe ị chọrọ ka o mee. Ihe niile ga na-aga n’anya ha ma ọ bụrụ na i mee ‘ka Ee gị bụrụ Ee, ka Ee e gị bụrụkwa Ee e.’—Jems 5:12.
Hụ nwa gị n’anya. Ezinụlọ ekwesịghị ịbụ ebe mmadụ na-eme otú masịrị ya, o kwesịghịkwa ịbụ ebe a na-akpa mmadụ ahụ́. Kama, ọ bụ ebe Chineke chọrọ ka e jiri ịhụnanya zụlite ụmụaka otú ha ga-aba uru. Ịdọ nwa gị aka ná ntị ga-eme ka ọ na-erube isi, meekwa ka ọ ghọta na ị hụrụ ya n’anya n’eziokwu.
“Nwata a hapụrụ ka ọ na-eme otú masịrị ya ga na-emenye nne ya ihere.”—Ilu 29:15.
“Ahapụla ịdọ nwatakịrị aka ná ntị.”—Ilu 23:13.
“Ọ bụrụ na unu ejighị ire unu kwuo okwu dị mfe nghọta, olee otú a ga-esi mata ihe unu na-ekwu?”—1 Ndị Kọrịnt 14:9.
ISIOKWU NDỊ ỌZỌ I NWERE IKE ỊGỤ
Ị gaa na jw.org/ig, ị ga-ahụ ihe ndị ọzọ Baịbụl kwuru ga-enyere ndị nne na nna aka. Gaa n’ebe e dere IHE BAỊBỤL NA-AKỤZI pịa ebe e dere NDỊ DI NA NWUNYE NA NDỊ NNE NA NNA ka ị hụ isiokwu ndị a:
“Ịdọ Ụmụaka Aka ná Ntị”
“Ihe I Nwere Ike Ime ma Nwa Gị Bido Ime Isi Ike Ụmụaka”
“Otú Ị Ga-esi Na-akwụsi Ike n’Ihe I Kwuru”
“Kụziere Ụmụ Gị Omume Ọma”
“Ihe Ị Ga-eme ma Nwa Gị Na-agha Ụgha”
“Otú Ị Ga-esi Kụziere Nwa Gị Ka Ọ Na-erubere Gị Isi”
Gụọkwa isiokwu bụ́ “Otú A Ga-esi Zụọ Ụmụaka Ha Abaa Uru.” Ọ dị na Teta! Ọktoba–Disemba 2011.
Ịzụ Ụmụ Alụmdi na Nwunye na Ezinụlọ
Ndị nne na nna, jirinụ akụkọ ndị a kụziere ụmụ unu Baịbụl.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Kụziere Ụmụ Gị Ka Ha Na-erube Isi
ISIOKWU TETA! A Ihe Ndị Ị Ga Na-eme Ka Ahụ́ Na-adị Gị Mma
IHE NDỊ GA-ENYERE EZINỤLỌ AKA Kụziere Ụmụ Gị Ka Ha Na-erube Isi
IHE BAỊBỤL KWURU Tigbuo Zọgbuo
IHE NDỊ GA-ENYERE EZINỤLỌ AKA Ihe Unu Ga-eme Ka Unu Ghara Itisa
IHE BAỊBỤL KWURU Mgbe Di ma Ọ Bụ Nwunye Mmadụ Kwara Iko
IHE NDỊ NA-EME N’ỤWA Akụkọ Gbasara Ala, Mmiri, na Ikuku
Nke Anọ: Izu Ohi Adịghị Mma
Nke na-enweghị foto Họrọ ụdị nke ị ga-adanlodu TETA! Ihe Ise Ị Ga Na-eme Ka Ahụ́ Na-adị Gị Mma
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ TETA! Ihe Ise Ị Ga Na-eme Ka Ahụ́ Na-adị Gị Mma
Ihe Ise Ị Ga Na-eme Ka Ahụ́ Na-adị Gị Mma
TETA! Ihe Ise Ị Ga Na-eme Ka Ahụ́ Na-adị Gị Mma
Jizọs Mụtara Irube Isi
Na-erubere Ndị Mụrụ Gị Isi
Otú I Kwesịrị Isi Na-agwa Nwa Gị Ihe Ọ Ga-eme na Ihe Ọ Na-agaghị Eme